Shin Sandadika (Pay Lay Pin Nat Mi Taw Ya) - Buddhism and Women Rights
>Venus closing into Moon seen as omen - some says
>Citizen of Burma Award for Burmese volunteers by the Burmese overseas launched
စာရေးဆရာ မောင်မောင်စိုးသို့ မိုးမခ၏ ဖြေရှင်းတောင်းပန်စာ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာပေက စာရေးဆရာ မောင်မောင်စိုး၏ နှင်းဆီနီနီအိပ်မက်များ အမည်ရှိ စာအုပ်ကို ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာက ပထမအကြိမ်အဖြစ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစာအုပ်၏ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းတွင် “ပုံနှိပ်စာအုပ်မူပိုင် – မိုးမခစာပေနှင့် ...
စံညိမ်းဦး – ပြည်တော်ဝင်
KT# ပြည်တော်ဝင် စံညိမ်းဦး (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ပြအိုး ပစ္စင် တုန်ရင်လို့ သူရဲခိုနဲ့ကားဆွဲပေါက်များဟာလည်း လွတ်လပ်ရေးကို ချောင်းကြည့်နေခဲ့ရရှာမယ်။ စစ်ကြီးပြီးတော့ လမ်းတွေပေါ်အပြေးအလွှား ပထမဆုံးကျလာတဲ့နေရောင်ခြည်ကို အငမ်းမရ ထွက်ရက်(လျှက်)မိကြမှာပဲ။ အချစ်တွေ...
ပန်ဒိုရာ ● အရိပ် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၈ သြဂုတ်လထုတ် မဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းမှာ အရိပ်တခု ရှိကြတယ်။ လူတိုင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အရာဝတ္ထုရယ်လို့ အကောင်အထည်နဲ့ရှိလာရင် အလင်း...
ဆွေဝင်း (Myanmar Now) ● နေပြည်တော်အမြန်လမ်းပေါ်တွင် FDA ငါးကြီးကို ဖမ်းမိခြင်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ အကြီးအကျယ် လာဘ်စားသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ FDA ညွှန်ချုပ်ကို အရေးယူနိုင်မှုသည် တာဝန်သိ...
ငြိမ်း (ပဲခူး) ● အမေ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ အမေက လက်ထဲမှာ အုတ်ခဲတလုံးကိုင်ပြီး နောက်ကနေ ပြေးလိုက်လာတယ်။ ကျွန်တော်က ရှေ့ကနေပြေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အမေက နောက်ကနေပြေးလိုက်ရင်းကျွန်တော်က ရှေ့ကနေပြေးရင်း...
ဆောင်းယွန်းလ ● ၂၂ ရာစုကောင်းမှု (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ ကိုယ့်မှာ ကိုယ့်ယုံကြည်ရာနဲ့ ကိုယ်မို့သူတို့ယုံကြည်မှုကို မသိကျိုးကျွံပြုနေလိုက်ရတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘလက်စ် Bless မှ အိပ်ယာထဲကထနိုင်မယ့်...
လင်းငယ် – ဗာရာဏသီ ကျောက်ဖြူ – ပစ္စုပ္ပန် အတိတ် နဲ့ အနာဂတ်
mapio.net မှ ကူးယူပါသည်။ ဗာရာဏသီ ကျောက်ဖြူ – ပစ္စုပ္ပန် အတိတ် နဲ့ အနာဂတ်လင်းငယ် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ ကျနော် ကျောက်ဖြူရဲ့လက်ရှိအမြင့်ဆုံးလူနေအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ ဗာရာဏသီဟိုတယ်အမိုးပေါ်မှာ ရောက်နေတာ ပဲ။...
ဒီလူည – ရယ်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခ
KT# ရယ်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခ ဒီလူည (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ အစကနေပြန်ပြီး သေနတ်ပစ်တမ်း ကစားနည်းကို မကစားမိအောင် မှတ်ဉာဏ်ကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရမယ် အသက်ရှင်ဖို့ကလည်း ဒီတနည်းပဲ နေပူထုတ်လှမ်းရတော့မှာမဟုတ်လား ဇီဝဗေဒပညာရှင်တယောက်လည်း စစ်ပွဲထဲမှာ မိုက်ခရိုစကုပ်ကိုင်ပြီး...
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – အေအိုင်တွေနဲ့ တိုင်းပြည် ဆိုပါလား (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ နည်းပညာတွေက ခေတ်ကို ဆန်းသစ်စေတယ်ဆိုကြတယ်။ အရင်ခေတ်ထဲမှာ နေခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ သူတို့သိတာ facebook google twitter တို့လောက်ပဲ...
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၇) – မျိူးမစပ်တဲ့ ဆေပီယန်စ်လား Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval Noah...
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Chicken
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Chicken (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post....
ခိုင်မာကျော်ဇော – အငတ် ကဗျာ
Artspace.com အငတ် ကဗျာ ခိုင်မာကျော်ဇော (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ တိုင်းပြည်ငတ်လို့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လာတယ် တိုင်းပြည်ကလည်း ငတ်နေတယ်။ တိုင်းပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရလို့ပြောတယ် တိုင်းပြည်ဟာ...
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – ဝေဒနာ
ဝေဒနာ ရဲရင့်သက်ဇွဲ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ တသက်တာရည်စူးထားခဲ့တယ်ငါ့မှာ ရှိသမျှအရာအားလုံးရိုးတွင်းချဉ်ဆီထိတိုင်အောင်ငါ ပေးခဲ့သမျှငါရခဲ့သမျှ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ လှပနေခဲ့တယ်မဟုတ်လား…. အခုတော့လည်း ဒါတွေဟာ… တံလျှပ်တွေပါခြေလွန် လက်လွန် ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ယုံကြည်မှုများ စမ်းတဝါးဝါးနှင့်ဆိုသော်လည်းမျက်စေ့မမြင်ရတော့တဲ့အခါအကြားအာရုံ ပိုထက်မျက်လာခဲ့သလိုပေါ့ကံကြမ္မာရဲ့ရိုက်ချက်ကြယ်တွေ လတွေနဲ့ မီးပွင့်သွားခဲ့တယ်...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် – ပြည်တွင်းစစ် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်, ပြည်တွင်းစစ် Related posts ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော နောက်ခံအကြောင်းအရာများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း (3) နှင်းခါးမိုး...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဒီမိုကရေစီမှာ မူထက် လူက အရေးပါ ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – အခန်းဆက် ၁၈ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ Steven Levitsky နှင့်...
ယံဇငြိဏ်း ● ကဗျာ ပြားပြီ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ လင်းသန့်​​ရေ လွန်းအိမ်​​ရေ သျှင်​ဇိုင်း​ရေ ကဗျာ ပြားပြီ ငါ့ကဗျာ​တွေ​တော့ ပြားကုန်​ပြီ။ အ​နောက်​ကထွက်​လာတဲ့​နေ​ပေါ် မတ်​မတ်​ရပ်​ပြီးကခုန်​ရင်း စုန်းတစ်​​ကောင်​လိုစကားလုံး​တွေ​ပေါ် ဗိုလ်​ကျခဲ့ဖူးတာ...
အေးငြိမ်း – ငွေသည် လူကို ပျက်စီးစေ၏
အေးငြိမ်း – ငွေသည် လူကို ပျက်စီးစေ၏ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ (၁) ဘာကြောင့် အဓိကတရားခံမှာ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ အသိဉာဏ်ပညာ နုံနဲ့ခြင်းဖြစ်၍ –...
မောင်လူရေး – သူခိုးမရှိတဲ့ ပြည် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ ဖွတ်ဂါရာမတွင် အစိုးရသစ်တန်ခိုးကြောင့် ခိုးမှုမရှိတော့။ နိုင်ငံတော်အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ သိန်းပေါင်းသိန်းကျော်အောင်ခိုးလျှင် နိုင်ငံတော်က အထူးလုံခြုံရေးပေး စောင့်ရှောက်ပြုစုသည်။ နိုင်ငံပိုင် သယံဇာတများကို...
သန်းဝင်းလှိုင် – ဆာဂျွန်ဆိုင်မွန်
သန်းဝင်းလှိုင် – ဆာဂျွန်ဆိုင်မွန် (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ ဗြိတိသျှအစိုးရက အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေး ပေးစဉ်က ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေး (၁၀)နှစ်ပြည့်လျှင် ၄င်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးသုံးသပ်မည်ဆိုသော အချက်တစ်ချက်ပါသည်။ လက်တွေ့ တွင်လည်း...
Page 1 of 93912345...939»